Imibuzo Evame Ukubuzwa - Sichuan Shuer Medical Devices Co, Ltd.
Sicela usithinte ukuze uthole imininingwaneulwazi
Inani elincane le-oda lincike kuma-oda akho ahlukene kanye nokupakisha.
Izindleko zokuthumela zincike endleleni okhetha ngayo ukuthola impahla.I-Express ngokuvamile iyindlela eshesha kakhulu kodwa futhi ebiza kakhulu.Ngasolwandle, impahla iyisixazululo esingcono kakhulu semali eningi.Izilinganiso ngqo zempahla singakunikeza kuphela uma sazi imininingwane yenani, isisindo kanye nendlela.
Ingabe Singahlinzeka ngezinsizakalo zokukhiqiza ze-OEM?
Singahlinzeka ngesevisi yesampula eyenziwe ngaphambilini ngaphambi kokuqala kokukhiqiza ngobuningi.Futhi sihlinzeka ngezinsizakalo zangokwezifiso neze-OEM kumakhasimende ethu.
Yiziphi izitifiketi esinazo?
Sinenombolo yemibiko yokuhlola yomkhiqizo evela eceleni kanye nezitifiketi, okuhlanganisa i-SGS, CE, NIOSH, nezitifiketi zokuhlola ze-STOS;ngesitifiketi esijwayelekile se-ISO9001:2016, esinamalungelo obunikazi okusungulwa okungu-3.
Ungakwazi ukuvakashelwa efekthri?
Vele, samukela amakhasimende ukuthi avakashele imboni yethu nganoma yisiphi isikhathi, ukuqonda ukuze sibambisane nathi isikhathi eside
Imikhiqizo Eshisayo - Imephu yesayithi - I-AMP Mobile I-FFP2 Respirator, Imaski yaseChina, I-PPE Mask, I-Pharmacy Surgical Mask, Imaski yobuso, I-China Protective Mask,